Global Voices teny Malagasy » Okraina : Ny Fomba Handaminana Ny Olan’ny Mpitsoa-Ponenana Mankany Eoropa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2016 3:46 GMT 1	 · Mpanoratra Anna Poludenko-Young Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Toeram-pandraisana ireo mpitsoa-ponenana any Yahotyn, Tanàna tsy lavitra ny renivohitra Okrainiana, naorina hampiantranoana ireo mpitady fialokalofana avy any amin'ny firenena hafa. Sary avy amin'ny Youtube.
Manomboka amin'ny ” loza mananontanona ny fahasalamana ” ka hatrany amin'ny ” fahafahana hampiroborobo ny toekarem-pirenena “— izany no fidadasiky ny raharaha ampiasain'ny Okrainiana mpanao politika hanazavàna izay mety hiseho rehefa nanokatra ny varavarany ho an'ireo mpitsoa-ponenana avy any amin'ny firenena hafa toa an'i Syria i Okraina.
“Heloka bevava ny mandray mpitsoa-ponenana avy any amin'ny firenena hafa raha mbola miady sy mitolona amin'ny krizy ara-toekarena ny firenenao. Tsy maintsy mikarakara ireo mpifindra monina avy any Donbas isika “, hoy  i Andriy Illienko, solombavambahoaka avy amin'ny antoko nasionalista ‘Svoboda’, tamin'ny fakàna ohatra ny ady mitàm-piadiana izay efa niainana tany Donbas nandritra ny roa taona izay.
“ Ity resaka ity (mpitsoa-ponenana Syriana mitady fialokalofana ao Okraina – GV) no ho fandaharam-potoanantsika ato ho ato. Rehefa tonga mpikambana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana i Okraina, dia tsy maintsy maneho firaisankina amin'ny resaka fandraisana mpitsoa-ponenana raha ilaina, hoy  ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Okrainiana, Pavlo Klimkin, tao amin'ny ‘canal 5′-n'ny fahitalavitra okrainiana.
Heverina fa afaka mandray mpitsoa-ponenana an'arivony i Okraina. Raha toa loza mitatao ho an'ny fahasalamana sy ny fahasambaran'ny Okrainiana no fahitan'ireo mpikambana sasany ao amin'ny Antenimiera Okrainiana izany, ireo hafa kosa dia efa mikajy sahady ireo tombontsoa ara-bola nampanantenain'ny Tandrefana. Na ny mpanohana na ny mpanohitra ny hevitra handray mpitsoa-ponenana avy any Afovoany Atsinanana dia samy manadino ny antsipirihany mavesa-danja : tsy tonga na hanorim-ponenana ao Okraina ireo mpitsoa-ponenana.
“Tsy hiaina ny firohotry ny mpitsoa-ponenana avy any Syria i Okraina. Fantatry ry zareo tsara fa miaraka amin'ny olana misy ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mbola tsy vonona i Okraina. Izany no antony ahitan'ireo mpitsoa-ponenana ny taninay ho toy ny faritra lalovana amin'ny làlany mankany Eoropa Andrefana,” hoy  i Maksym Yakovlev, mpampianatra siansa politika ao amin'ny akademia Kyiv-Mohyla any Okraina
Tamin'izay fotoana izay, no nilazan'ireo Okrainiana sangany amin'ny politika fa misy mpitsoa-ponenana maro be avy any amin'ireo ao fanjakana Afovoany Atsinanana toa an'i Syria lazaina fa efa eny “an-dàlana ho any Okraina”. Fotoana ahafahana mangata-bola sy tombony ara-barotra amin'i Alemaina ny fahitan'izy ireo ny olan'ny mpitsoa-ponenana, satria ny Chancelière Alemà Angela Merkel mihitsy no nampanantena  izany ho an'izay vonona hanampy amin'ny firohotry ny vahoaka mandositra ady, hanoanana sy fahantràna.
“Hiezaka ny Firaisambe Eoropeana hanatsara ny fepetram-piondranana ho an'ireo firenena mibaby ny vesatry ny fifindràmonina noho ny krizy any Syria. Ary mety hisy tombony ara-barotra amin'izany, ” hoy  i Merkel.
Misy ireo mpitsoa-ponenana sasany avy any Syria mandalo an'i Okraina, saingy fohy ny fotoana hijanonany ao. Matetika tsy mijanona akory, ataon'ireo mpitsoa-ponenana faritra fiampitàna amin'ny làlana ho any amin'ireo firenena Eoropeana Tandrefana ny faritra andrefan'i Okraina. Tokony hikarakara ny sasany amin'izy ireny i Okraina, saingy firenena tsy manam-bola. Ho fanatanterahana izany dia vola efatra lavitrisa dolara fara-fahakeliny no ilain'i Okraina mba hananganana indray ny tobim-pitsoa-ponenana vaovao sy hikarakaràna ireo efa misy.
Nolazain'ny  Minisitry ny raharaham-bahiny, Klimkin, fa na dia tsy mbola nanapa-kevitra ny ho avy maro be aza ny mpitsoa-ponenana amin'izao fotoana izao, dia tsy maintsy manaiky azy ireny sy manome azy izay singa fototra rehetra ilainy i Okraina mba hanehoana ny firaisankina amin'ireo Eoropeana Tandrefana mpiara-miasa.
Tohanan'ny Sampan-draharaha Nasionaly miandraikitra ny Mpitsoa-ponenana izany hevitra izany. Vao haingana io no nilaza fa vonona ny hanampy an'i Eoropa amin'ny famahana ny krizy sy vonona handray mpitsoa-ponenana ao amin'ny taniny i Okraina. Mamarana ny vinavinany momba ny isan'ireo mpitsoa-ponenana azon'i Okraina raisina ireo manampahaizana momba ny fifindràmonina amin'izao fotona izao.
Ny fanamarihan'ireo hery farany havanana
Tsy ny rehetra no faly momba ireo olona mety ho avy ireo. Ireo mpikambana ao amin'ny hery farany havanana ao an-toerana sy ao amin'ny vondron'ny olompirenena no tena mavitrika amin'ny fampielezana vaovao tsy marina momba ny mpitsoa-ponenana any Okraina. MAvitrika izy ireo amin'ny fanohanana sy fampiroboroboana ny fisainana toy ny anganongano fa hitondra valanaretina vaovao ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana ny mpifindra monina. Ezahan'ireo hery ireo indrindra ny hanisika ao an-tsain'ny olona ny hevitra hoe aleo ireo mpitsoa-ponenana avy any Atsinanan'ny firenena sy Krimea no karakaraina toy izay ireo mpitsoa-ponenana avy any Afovoany Atsinanana .
Ohatra akaiky indrindra ny tobin'ny mpitsoa-ponenana any Yahotyn, tanàna antsasakadiny amin'ny fiarakodia avy ao Kiev renivohitra, ahitàna ny fomba fandranitan'ireo mpomba ny hery ankavanana ny fanenjànana ny tadim-panavahana mifandraika amin'ny mpitsoa-ponenana eny anivon'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana. Farany teo, tonga tany Yahotyn ny solontenan'ny Firenena Mikambana miandraikitra ny fifindràmonina sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona hanazava tamin'ny mponina tany an-toerana fa vola avy tamin'ireo Eoropeana malala-tànana no nanaovana ny tobin'ny mpitsoa-ponenana izay hisokatra ao an- toerana afaka iray volana. Handray ireo rehetra mpitady fialokalofana avy any amin'ny firenena hafa no antom-pisiany, fa tsy ny avy any Syria irery ihany. Miankina amin'izay zavatra ilain'ny olona mitady fialokalofana any Okraina ny fanapahankevitra ny amin'izay hapetraka ao amin'ilay toby vaovao fa tsy miankina amin'ny firenena niaviany. Noho izany, tamin'ireo mpitsoa-ponenana 110 voalohany nekena hitoby dia nisy avy any Palestina, Pakistana, Afganistàna, Rosia ary Syria.
Nandritra ny fitsidihana farany indrindra nataon'ny mpiasan'ny Firenena Mikambana sy ny solontenan'ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny fifindràmonina tany Yahotyn mba hamaliana ny fanontanian'ny olona ao an-toerana, dia nanao fihetsiketsehana  ireo mpikambana avy ao amin'ny hery faran'ny havanana. Raha mbola niresaka tamin'ireo vondrom-piarahamonina, tao anatin'ny Tranon'ny Kolontsainan'ny tanàna ireo manampahefana, ireo Okrainiana mpikatroka ao amin'ny vondron'ny mpiasa an-tsitrapo ” Rantsan'ny Havanana” sy ny vondron'olon-tsotra “Azov” kosa nanangona ny mpanohana azy tao ivelany. Nantsointsoin-dry zareo ny teny faneva toy ny hoe ” TSIA hoy izahay amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Yahotyn ” sady nolazainy tamin'ny mponina fa fara-fahakeliny 200 ireo mpitsoa-ponenana avy any Syria tokony ho tonga ao an-tanànany amin'ny volana May. Nampangain'ireo mpikatroka ao amin'ny hery farany havanana ho ” mitondra karazana valanaretina tsy fantatra”, ireo mpitsoa-ponenana, “isan'izany ny viriosin'ny Zika” ary noheveriny koa fa hidangana be ny tahan'ny heloka bevava ao an-toerana, tamin'ny nilazany fa mety hisy ny fanafihana fampihorohorona sy ny fifandonana ara-pivavahana noho ireo fahatongavana vaovao ireo. Samy tsy misy porofo mazava na ny isan'ny mpitsoa-ponenana (200 fa tsy 110 araka ny filazàna ôfisialy) na ny fampitandremana, fa mikendry ny hampiorina tahotra sy fifampiahiahiana eo amin'ny samy mponina ao an-toerana no kendreny.
Ireo mpitsoa-ponenana eny anaty Haino aman-jery Okrainiana
Zara raha nanao ezaka ny haino aman-jery Okrainiana, amin'ny fitrandrahana ny vaovao farany sy ny antsipiriham-baovao manindrotsindrona mba hampahafantatra sy hanazava ny andraikitr'i Okraina amin'ny olan'ny mpitsoa-ponenana Eoropeana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny haban-tranonkala mpanara-maso ny haino ama-jery Detector.Media , tsy misy na iray aza amin'ireo fahitalavitra malaza ao an-toerana nandrakotra amin'ny fomba marina sy mahitsy ny tantaran'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana. Tsy misy milaza ny ankamaroan'izy ireo fa vola avy tamin'ny Firaisambe Eoropeana no nanamboarana ilay toby. Ireo mpanao gazety sasany aza moa dia sahy mandiso sy lahateny fankahalana am-pahibemaso, milaza ireo mpifindra monina ireo ho “olona tsy azo antoka” sy ” mpirenireny izay atahoran'ny ao an-toerana satria olondia sy hanimba zavatra maro”. Hitan'ilay fanadihadiana ihany koa fa saika ampitahain'ireo tantara hafa rehetra ireo mpitsoa-ponenana Syriana sy ireo mpifindra monina avy any Atsinanan'i Okraina.
Raha ny marina, dia tsy mitovy amin'ny filazalazàna ataon'ny haino aman-jery ao an-toerana ny fangatahana fialokalofana any Okraina. Mahatratra 1.500-2.000, isan-taona, ny fangatahana fialokalofana voarain'i Okraina avy amin'ireo mpitsoa-ponenana avy any amin'ny firenena 44. Manodidina ny 200-300 ihany ireo olona tsara vintana ekena isan-taona.
“Lavina ny ambin'ireo fangatahana. Izany no antony tsy mahabetsaka ireo mpifindra monina any Okraina tahaka ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena Eoropeana,” hoy i Natalia Naumenko, talen'ny Sampan-draharaha miandraikitra ny Vahiny sy ny tsy manana zom-pirenena ao amin'ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny Fifindràmonina nandritry ny resadresaka nataony tao amin'ny TV Hromadske. “Raha ny momba ireo mpitsoa-ponenana avy any Syria, 200 ka hatramin'ny 250 eo ho eo isan-taona ireo olona avy any amin'io firenena io no mangataka fialokalofana any Okraina.”
Noho ny tsy fisian'ny fandrakofana araham-panadihadiana lalina ataon'ny haino aman-jery momba io resaka io, dia mbola hanararaotra ny tsy fahalalan'ny vahoaka ny momba ny resaka fandraisana mpitsoa-ponenana ihany ireo mpanao politika sy ireo mpikatroka ifotony manohitra ny fifindràmonina, amin'ny fanatsaràna ny endriny any amin'ny vondrona Eoropeana Tandrefana na mba hahazoana ny fanohanana bebe kokoa avy amin'ireo Okrainiana hafa. Fa ireo mpitsoa-ponenana izy tenany kosa, mandritra izany fotoana izany, tavela any ambadik'i sahondra, ain'olona afoy eny an-dranomasin'ny tantara mahaontsa sy ny lalao politika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/24/81843/
 mavitrika amin'ny fampielezana vaovao tsy marina : http://life.pravda.com.ua/columns/2016/03/15/209419/
 nanao fihetsiketsehana: https://www.youtube.com/watch?v=rZUxZI1jUbk
 resadresaka : https://www.youtube.com/watch?v=i4_msvIlrco